Waxay aqoonsadeen nooc cusub oo weerar ah oo saameeya Intel iyo AMD Processor | Laga soo bilaabo Linux
Koox ka mid ah Baarayaasha Jaamacadda Virginia iyo California ayaa soo bandhigay nooc cusub oo weerar ah dhismooyinka microarchitecture ee processor-rada Intel iyo AMD.
Qaabka weerarka loo soo jeediyay waxay la xiriirtaa adeegsiga kayd dhexdhexaad ah oo ah hawlgallada yaryar (micro-op cache) ee processor-yada, kaas oo loo adeegsan karo in lagu soo saaro macluumaadka la dejiyay inta lagu gudajiro fulinta tilmaamaha.
Waxaa la arkay in hab cusub oo si weyn uga roon weerarkii Specter v1 marka la eego waxqabadka, way adkeyneysaa in la ogaado weerarka mana xannibna hababka jira ee looga hortago weerarada iyada oo loo marayo wadiiqooyinka dhinaca loogu talagalay in lagu xakameeyo nuglaanta ay keeneen fulinta mala awaalka ah ee tilmaamaha.
Tusaale ahaan, adeegsiga bayaanka 'LFENCE' wuxuu xannibayaa daadinta heerarka dambe ee fulinta mala-awaalka ah, laakiin kama ilaalinayso inay ku soo daadato iyada oo loo marayo dhismayaasha microarchitectural.
Qaabku wuxuu saameeyaa moodooyinka Intel iyo AMD processor ee la sii daayay tan iyo 2011, oo ay ku jiraan Intel Skylake iyo taxanaha AMD Zen. CPU-yada casriga ahi waxay u kala diraan tilmaamaha processor-ka adag kuwa fudud ee microoperations-ka loo yaqaan RISC, kuwaas oo lagu keydiyay keyd gooni ah.
Kaydkan aasaas ahaan wuu ka duwan yahay kaydadka heer-sare ah, si toos ah looma heli karo waxayna u shaqeysaa sidii durdur qulqulaya si dhakhso leh loogu helo natiijooyinka tilmaamida tilmaamaha CISC ee dhismaha microminstruction RISC.
Si kastaba ha noqotee, cilmi-baarayaasha waxay heleen hab lagu abuuro xaaladaha ka dhasha inta lagu jiro isku dhaca marinka keydka iyo u oggolaanshaha in la xukumo waxa ku jira keydka hawlgallada yaryar iyadoo la falanqeynayo kala duwanaanshaha waqtiga fulinta ficillada qaarkood.
Kaydka micro-op-ka ee processor-ka Intel waa loo qaybsan yahay qaraabada processor-yada (Hyper-Threading), halka processor-ku AMD Zen waxay isticmaashaa khasnado la wadaago, taas oo u abuureysa shuruudo daadinta xogta kaliya hal xariiq oo fulin ah, laakiin sidoo kale inta udhaxeysa miiqyada kala duwan ee SMT (daadinta xogta waa suurtagal inta udhaxeysa koodhka ku shaqeynaya xuduudaha macquulka ah ee CPU).
Cilmi baarayaashu waxay soo jeediyeen hab aasaasi ah si loo ogaado isbeddelada ku dhaca keydka micro-ops iyo xaalado kala geddisan oo weerarro u oggolaanaya in la abuuro wadiiqooyin gudbinta xogta oo qarsoodi ah loona isticmaalo koodh nugul oo lagu kala shaandheeyo xogta sirta ah, labadaba hal nidaam (tusaale ahaan, in la abaabulo hanaan xog daadanaya markii uu soconayo saddexaad Koodhka qayb ka mid ah matoorada JIT iyo mashiinnada dalwaddii) iyo inta u dhexeysa kernel-ka iyo geeddi-socodka goobaha isticmaalaha
Iyadoo la sameynayo nooc ka mid ah weerarkii Specter iyadoo la adeegsanayo keydka micro-op, cilmi baarayaashu waxay ku guuleysteen inay soo saaraan 965.59 Kbps oo leh qalad ah 0.22% iyo 785.56 Kbps markaad isticmaaleyso qalad qalad ah, haddii ay dhacdo in isla dillaac ku yimaado isla xusuusta booska. iyo heerka mudnaanta.
Iyada oo qulqulaya heerar kala duwan oo mudnaan ah (inta udhaxeysa kernel iyo meesha isticmaalaha), soosaarka wuxuu ahaa 85,2 Kbps oo lagu daray qalad qalad ah iyo 110,96 Kbps oo leh xaddiga qaladka 4%.
Markii la weerarayey processor-yada AMD Zen, oo la abuurayo daadad u dhexeeya mawaadiic kala duwan oo CPU ah, soosaarka wuxuu ahaa 250 Kbps oo leh qalad ah 5,59% iyo 168,58 Kbps oo leh qalad sax ah. Marka loo barbardhigo habka caadiga ah ee Specter v1, weerarka cusub wuxuu noqday 2,6 jeer ka dhakhso badan.
Yaraynta weerarka qafis-yar-yar ayaa la filayaa inay u baahan tahay isbeddello hoos u dhac ku keenaya waxqabadka marka loo eego markii difaaca Specter la karti-yeelay.
Isu tanaasulka ugu fiican, waxaa loo soo jeediyay in laga hortago weerarada nuucaan oo kale ah iyadoo aan la carqaladeynin kaydinta, laakiin heerka kormeerka anomaly iyo go'aaminta xaaladaha kaydka ee weerarada.
Sida weerarada Specter, abaabulidda daadinta firida ama geedi socodka kale waxay u baahan tahay fulinta qoraal gaar ah (aaladaha) dhinaca dhibanaha dhiniciisa hawsha, taasoo horseedaysa fulinta mala awaalka tilmaamaha.
Qiyaastii 100 aaladaha noocaas ah ayaa laga helay Linux kernel waana laga saari doonaa, laakiin xalalka ayaa si joogto ah loo helaa si loo abuuro, tusaale ahaan kuwa la xiriira bilaabista barnaamijyada sida gaarka ah loo farsameeyay ee BPF ee kernel-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Waxay aqoonsadeen nooc cusub oo weerar ah oo saameeya Intel iyo AMD processor-yada